I-EMUI sele inabasebenzisi abangaphezulu kwezigidi ezingama-470 zemihla ngemihla | I-Androidsis
I-EMUI sele inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-470 zemihla ngemihla
IHuawei ibisematheni mva nje, Ukunyuka ngokukhawuleza ukuze ube yinkampani yesibini ngobukhulu ye-smartphone kunye nokuthengisa amakhulu ezigidi zee-smartphones kwihlabathi liphela kule minyaka idlulileyo, ethi, kunye neninzi ye-Honor mobiles, iqhube i-EMUI, ulungelelwaniso lwenkampani.
I-EMUI, okwangoku, iye yakhula ngokukhawuleza. Okwangoku inabasebenzisi abaphantse babe zizigidi ezingama-500 ngosuku!
Kumsitho osasazo izolo, uMongameli weHuawei kaMthengi uGqr. Wang Chenglu ukutyhile oko I-EMUI idlulile kwizigidi ezingama-470 zabasebenzisi abasebenzayo mihla le. Ukuza kuthi ga ngoku, inkqubo yokusebenza esekwe kwi-Android iyafumaneka kwiilwimi ezingama-77 nakwimimandla engama-216.
Emva kokunika amanani aphambili kulungelelwaniso lomenzi, uGqirha uWang uqinisekisile ukuzibophelela kukaHuawei ekuphuculeni. Uye wakhankanya ezinye zophuculo olubalulekileyo kuhlelo lwamva nje lwe-EMUI, ezinje ngetekhnoloji ye-GPU Turbo kwi-EMUI 8.2, Qhagamshela iTurbo kunye ne-EMUI 9.0, kunye neHuawei Arca Compiler yayo kuhlaziyo lwe-EMUI 9.1. Kwintetho ukwabhengeze uphuhliso inkqubo yokusebenza ebenalo kule minyaka idlulileyo.
Ngokuthunyelwa kukaHuawei ngaphezulu kwe-59 yezigidi zeeyunithi zee-smartphones kwikota yokuqala yalo nyaka, inkampani imiselwe ukophula ithagethi iyonke yokuthunyelwa kwezigidi ezingama-250 zonyaka. Njengokuba i-Huawei kunye ne-Honor ii-smartphones zifikelela kwintengiso, I-EMUI kulindeleke ukuba ikhule ngokukhawuleza kule minyaka izayo.
Kungekudala umaleko uza kuphumeza imisebenzi kunye nophuculo, ukusukela IHuawei ifuna ukonyusa inani labasebenzisi emhlabeni, kwaye oku kuyimfuneko ukuyila ngokutsha kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-EMUI sele inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-470 zemihla ngemihla
Yenza ibhokhwe inyuke iincopho zeFlip Flop
I-Google iya kuqalisa inguqulo ye-Android Oreo kwiifowuni ezilula